महाअभियोग फिर्ता लिनु राम्रो - Radio Sagarmatha महाअभियोग फिर्ता लिनु राम्रो
महाअभियोग फिर्ता लिनु राम्रो
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तीले विभिन्न पाँच विकल्पमा छलफल गर्नुभएको छ । विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेपनि के गर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमा रहेको छ । शनिबार विभिन्न विकल्पमा छलफल भएपनि आइतवार टुंगो लगाउने स्रोतको दाबी छ ।
यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू कसरी अगाडि बढ्लान त ? कसरी अगाडि बढ्दा यो विषयले निकास पाउन सक्ला ? भन्ने विषयमा एकजना राजनीतिक विश्लेषक डा. पुरुषोत्तम मरहठ्ठासँग रेडियो सगरमाथाको विहानी कुरामा सहकर्मी कोमलविश्वकर्मा र सम्झनामहर्जनले कुराकानीगर्नुभएको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि सरकार अन्योलमा त छ नै, अब यो बिचमा दलहरूले के गर्लान ?
हेर्नुस, सरकार पनि अन्यौलमा बस्नुपर्ने कुनै आवश्यक छैन । साथै अन्यदलहरू पनि अन्यौलमा बसिरहनुपर्ने आवश्यक छैन । आज बस्ने भनएिको संसद बैठकले यस बारेमा पक्कै पनि केही निष्कर्ष निकाल्ला भन्ने मलाई लाग्छ । यस्तो किसिमको अवस्था २०३५ सालमा पनि आएको थियो । हुन त त्यतिबेला संसद थिएन राष्ट्रिय पञ्चायत थियो । तर यसबारे आज हुने संसद बैठकको परिणामलाई हामीले पर्खनै पर्छ ।
अब यस्तो अवस्थामा दलहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ होला ?
यस्तो अवस्थामा प्रस्ताव अगाडि बढाउनुभन्दा बरु फिर्ता लिनुपर्ने देखिन्छ । जुनरुपमा जनताको विश्वासमा प्रयोग हुनुपर्ने महाअभियोग जनताको विश्वासबिना प्रयोग भएको छर्लङ्गै छ । पुष्टि नहुने खालको यति ठूलो आक्षेप लगाएपछि दलका नेताहरूले कुनै न कुनै सार्वजनिक जवाफ अवश्य दिनै पर्ने देखिन्छ । यस्तो किसिमको कार्य गरिरहँदा भोली उनिहरूनै यस्को सिकार नहोलान भन्न सकिँदैन ।
न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश ग¥यो भन्ने आरोप पनि छ नी ?
हेर्नुस काम गर्दै जाँदा मानवीय त्रुटि र समस्याहरू न्यायालयभित्र पनि नदेखिने होइनन् । तर, विकल्प र उपचारको हतियार महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु उचित होइन । न्यायपालिका एउटा मान्यता र विश्वासले चल्ने निकाय पनि हो । राज्यका अरू निकायको निहित उद्देश्य र स्वार्थ हुने भएकाले न्यायपालिकालाई नै ज्यादा विश्वास गर्ने चलन जताततै रहँदेै आएको छ । ऊपनि एउटा दायरा तथा मूल्य र मान्यता अन्तर्गत रहेर हिंडिरहेको संस्था हो । न्याय सम्पादनका कामकारबाहीका क्रममा केहि असहमति हुन सक्लान् । न्यायदिने क्रममा पनि विभिन्न राय हुन सक्लान् । तर यो भन्दैमा संविधानमा राखिएको महाअभियोगको प्रावधान सजिलो र लहडबाजीमा प्रयोग हुने अस्त्र होइन ।